ခရစ်တော်၌လူသစ် – Page2– Shwe Canaan
လူသစ်နှင့် ဆုတောင်းခြင်း – အခန်း (၁၃)
February 6, 2012 Shwe Canaan 0
NEW LIFE AND PRAYER ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ စကားပြောဆက်သွယ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသစ်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲလာခြင်းဟာ ဘုရားသားဖြစ်လာ ခြင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် အဘဘုရားသခင်နဲ့ စကားပြောဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ အခွင့်ထူးကို ခံစားလာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂလာ၊၄း၆ မှာ “ထိုသို့ သင်တို့သည် သားဖြစ်သောကြောင့် […]
NEW LIFE AND THE WORD OF GOD လူဟောင်းကနေ လူသစ်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲလာဖို့အတွက် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားနာယုံကြည်ခြင်းဟာ အဓိကကျသလို လူသစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာလဲ နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာသာ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ရပ်တည်ပြီး ဆက်လက်အသက်ရှင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ သမ္မာ ကျမ်းစာကို ခုံမင်နှစ်သက်လာခြင်းဟာ အသက်တာပြောင်းလဲလာခြားရဲ့ […]
လူသစ်နှင့် သက်သေခံခြင်း – အခန်း (၁၅)
NEW LIFE AND WITNESSING ဘုရားသခင်ဟာကယ်တင်ပိုင်တဲ့ဘုရား၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘုရား၊ဖြောင့်မတ်တိကျတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသက်သေပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့(ပြောင်းလဲပြီးသူ)တွေကို လောကမှာ ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့် ပေးထားတာ ဖြစ်တယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကို တန်ခိုးနဲ့သက်သေခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တမန်၊၁း၈မှာ-“သင်တို့သည် မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်”လို့ ကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ စကားဟာ ကျွန်တော်တို့အားဖြင့် ဒီခေတ်၊ ဒီအချိန်အခါမှာ ပြည့်စုံလာရမှာ ဖြစ်တယ်။ (က) သတင်းစကားကြားပြောခြင်း […]
လူသစ်နှင့် မိတ်သဟာယ – အခန်း (၁၄)
NEW LIFE AND FELLOWSHIP ပြောင်းလဲပြီးသူ အချင်းချင်းမိတ်သဟာယ ဖွဲ့ဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်သူကိုမဆို ခင်မင်ရင်းနှီးတတ်ဖို့၊ ဖော်ဖော်ရွေရွေ နေတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲပြီးသူအချင်းချင်းအနေနဲ့ အတွင်းကျကျ ပေါင်းသင်းမိတ်သဟာယ ဖွဲ့ခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရတွေကတော့ –(Matt. 18:19-20) (က) မေတ္တာ၌ လက်တွေ့ကျင်လည်ခြင်း(1Cor. 13:1-8) […]
လူသစ်နှင့် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော် – အခန်း (၁၆)
NEW LIFE AND THE WILL OF GOD လူ့ဇာတိကိုခံပြီး လောကမှာ နေထိုင်ခဲ့စဉ်အချိန် ခရစ်တော်က “ငါသည် ကိုယ့်အလိုသို့ လိုက်ခြင်းငှာ ကောင်းကင်မှ ဆင်းသက်သည် မဟုတ်၊ ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသော သူ၏အလိုကို လိုက်ခြင်းငှာ ဆင်းသက်၏” လို့ မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ် (ယော၊၆း၃၈)။ […]
လူသစ်နှင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း – အခန်း (၁၇)
အခန်း (၁၇) လူသစ်နှင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း NEW LIFE AND THANKS GIVING ခရစ်ယာန် အသက်တာဟာ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ အသက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆာလံ၊ ၁၂၆း၃ မှာ “ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့အဖို့ ကြီးသောအမှုကို ပြုတော်မူပြီး၊ ငါတို့သည်လည်း […]